Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa Fedora 21 !!! | Kubva kuLinux
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Fedora 21
Mhoro shamwari kubva kuDesdeLinux, nhasi ndinokuunzira iyo yekupedzisira-yekuisa dzidziso ye Fedora 21 ine yayo default Gnome nharaunda. Asati samazuva ese mimwe mifananidzo:
Ini ndinowana kupi Fedora 21?
Dzimwe shanduro dzakadai se KDE, LXDE, XFCE kana Mate dzinogona kutorwa pasi kubva pano:
Iye zvino tinovhura iyo terminal uye pasi pemudzi isu tinoita:
wget http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-21.noarch.rpm && yum kuisa rpmfusion-yemahara-kuburitsa-21.noarch.rpm wget http://download1.rpmfusion.org /nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-21.noarch.rpm && yum install rpmfusion-nonfree-release-21.noarch.rpm
Iwe unodhawunirodha pasuru kubva kune yepamutemo webhusaiti: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/ kusarudza iyo vhezheni yeyum uye nekudzvanya kaviri iro rakaburitswa pasuru rakaiswa.
Kuisirwa mapakeji anonyanya kushandiswa:
yum kugadzirisa && yum kuisa java-1.8.0-openjdk flash-plugin icedtea-web firefox thunderbird unrar zip unzip p7zip vlc libreoffice gimp wget mc htop gnome-tweak-tool filezilla system-config-firewall brazier
yum kuisa gstreamer gstreamer-plugins-yakanaka gstreamer-plugins-yakaipa gstreamer-plugins-yakaipa gstreamer-ffmpeg
Isa kuvaka kwakakosha (sarudzo):
yum groupinstall "Zvishandiso Zvekuvandudza" "Mabhuku Ekuvandudza"
Uye wakagadzirira. Ivo vagara vaine yavo Fedora 21 yakagadzirira :).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Fedora 21
Kutenda @petercheco nekugovana, ini handina kupa Fryer mukana kwenguva yakareba, kunyangwe pamwe vamwe vasingade SystemD vanozogadzira forogo nekuisa #Fuuuudora.
Ngatisimudzei chaiyo kunze uko tione kuti zvinofamba sei.
Zvinoshamisira sei kuti ini ndinoti ndinoshandisa windows 8.1, apo ini ndiri kushandisa iyo Windows 10 Yekutanga Yekuvandudza mune rangu basa ...
Unogamuchirwa shamwari. Inokodzera kuyedzwa :).
Great distro, isu tichaedza mumushini chaiwo kuti unoshanda sei.
Fedora inouya neiyo gnome tweak chishandiso? nekuti kana zvisiri, ndinokukurudzira 🙂
Mumutungamiri kunouya kuiswa kwayo ...
Mune yangu gwara kunouya maitiro ekuisa ...
Inoisa pamwe neyakagadziridzwa pamusoro. Kutenda nekutumira.
Chinonyanya kukosha uye chekutanga pane zvese kubvisa marara kubva kugenome nekuisa desktop yakanaka se KDE [/ troll]
Zvakakomba (tsime, izvo zvaimbove zvaive zvakare hafu yakakomba xD) kune akanakisa mareti eFedora ayo anotaurwa zvishoma asi kwandiri kwandiri anenge akakosha (uye kune avo vanoaisa ndinofunga vachadarowo)
yum kuisa http://mirror.yandex.ru/fedora/russianfedora/russianfedora/free/fedora/russianfedora-free-release-stable.noarch.rpm
yum kuisa http://mirror.yandex.ru/fedora/russianfedora/russianfedora/nonfree/fedora/russianfedora-nonfree-release-stable.noarch.rpm
Chromium, Skype, Opera, rar, flash, java 1.6 uye nezvimwe. Hapana kana chinhu xD. Nekuda kwekuti iyi repo inopa iyo Flash player, unogona kuita pasina adobe repo.
Postinstallerf: repo ine akasiyana software, kunyanya multimedia, vashanduri, nezvimwe. Inonyanya kubatsira, mukomana pane ino webhusaiti anoichengeta.
Iwe unogona ipapo gadza mhando ye software Center neiyi:
yum kuisa postinstallerf
Zvinonakidza kuisa mamwe mapurogiramu uye kuita mamwe marongero. Chinhu chakashata ndechekuti chirongwa ichi chinoisa iyo Dropbox repo kuti kana ukasashandisa Gnome haina kufarira uye chromium repo iyo isingafarire chero sezvo Russianfedora yatopa iyi package. Ini ndinoshandisa iyo yekutumira zviito zviito plugin kudzima iwo zororo nguva dzese apo iko kunyorera kunovandudzwa.
Pakupedzisira, repo iyi yakati shamisei:
Rpm-sphere: Iyo ine zviuru zvemapakeji, chakashata ndechekuti haina kuvimbika zvakanyanya, pane mapakeji iwe aunoisa iwo uye haashande munzira ipi neipi uye mamwe mapakeji akatyoka, asi zvakakosha kune iyo mapakeji anoita basa uye mujenya weiyo gtk uye icon theme iyo yaanopa. Ini ndakaisa dzimwe chess injini, iyo graphical interface ye sopcast uye chimwe chinhu. Ini ndinokurudzira zvikuru kuiisa, hauzomboziva kana uchizowana chimwe chinhu mukati chaunoda.
Pachine hapana vhezheni ye repo yeFedora 21. Nekudaro, repo ichashanda uye unogona kuigadzirisa gare gare nekugadzirisa iyo faira kunongedzera kuna Fedora 21. Iyo repo iri kushanda, nenzira, yekupedzisira shanduko iri kubva muna Zvita 1. .
petercheco, ... yakanaka sei iyo system yanga iri muFedora, ... iwe uri nyanzvi muLinux uye yemahara software.
Nenzira, kana iwe ukabuda pamwe neyechipiri gwara rekuti ungaita sei uye nekushongedza FreeBSD neXfce uye Slim ?, ..... kwaziso.
Chupamedias, tinodaro kune vanhu ava.
Iwe unenge uri izwi rakapusa raunofarira kutuka vanhu pasina chikonzero.
Mhoro Nando uye ndinokutenda zvikuru. Parizvino ndiri kutamba nemoto wekudzivirira moto uye ndichiita zvinhu zvekupenga nemapakeji eseva. Chinyorwa pamusoro pacho chichauya nekukurumidza uye ipapo FreeBSD neGnome-shell iyo inoshandisa 230 megabytes eRamu :).
Kutarisira mberi kune chikamu chechipiri chebhuku. Kutenda peterchecho nechikamu chekutanga ...
Kuti ndikuudze chokwadi, ndiri kufunga kusiya Debian uye kuenda kuFreeBSD, ndakazviedza kwemakore, asi ikozvino nekuchinja kwepkg, zviri kundinakira ..
Kunyangwe chinhu chega chinondinonotsa (nekuti ndakasimbisa kuti ine zvese zvirongwa zvandinoda) maumbirwo eWi-Fi. Izvozvi muGNU / Linux, pane wicd, asi ini ndinoona kuti haina kuendeswa kuFreeBSD uye ini neiyo laptop ini ndiri kubatanidza kune akasiyana vakadzi, nekuti ini ndinoona kamuti kadiki kuti kari kugadzirisa mafaira ekubatanidza (ndinofunga kuti rc.conf uye wpa). Wakagadzirisa nyaya iyi here? Kufanana Kana iwe ukashandisa wifi ...
Ndinokurudzira iwe edza wifimgr kubata wako wifis.
pkg gadza wifimgr
Sezvo iwe uchitaura FreeBSD, zvingave zvakanaka kuve negwara rakazara rekumisikidza gnome, nekuti ini ndakazvirova neiyo yekumisikidza uye hapana chakasvika kune graphical nharaunda zvachose murunyararo
Peter akanaka sei connoisseur !!!
Sezvo nyanzvi yeGNU / Linux inoti nando 🙂
Isu tinoda wechipiri gwara rekunatsa FreeBSD xfce ndapota, ini ndave kutoda kuti riite senge fedora, ine ayo anotyisa mifananidzo.
Pindura kune slimTelmex
Dhawunirodha aya mapakeji:
Unovabvisa uye unogadzira maforodha maviri mumba mako. Imwe ine zita .icons uye imwe ine zita .themes
Mune iyo .icons dhairekitori iwe unonama mafolda Numix denderedzwa uye Numix
Mune dhairekitori .vaya vanonamatira dhairekodhi Numix (GTK)
Iye zvino iwe chingosarudza iwo madingindira mune iyo XFCE marongero.
Ndinoona ichibatsira kwazvo kune vafans veiyi distro. Izvo zvinogara zvakanaka kuti uone kuti software, ingave yakasununguka kana isina kusununguka, kufambira mberi.
Ndinoshuva: Ndinovimba kuti kune inotevera vhezheni yeFedora pc ichabuda iyo ine sarudzo yeku pre-kuiisa, nekuti mahara software ichave zvinhu zvakawanda, asi pamusoro pazvo zvese ndine chivimbo chekuti chakasiyana, chimwe chinhu kuti haina, uye inondipa yangu uyo ​​asingazombove, proprietary software. Simba iro Fedora - senge vamwe- nedanho rimwe nerimwe ravanotora vanoratidzira
ziva kuti uri Red Hat beta-tester uye sarudza kuisa chero imwe GNU / Linux isina kurongwa nekambani yakazvimiririra.
Kwaziso kubva kumaodzanyemba.
PS: Ini handina kukwanisa kuzvibatsira, kukumbira ruregerero kune ma "touchy geeks."
Reka kutaura zvakapusa. Fedora inongogadzira uye inotsigira yemahara software uye kana iwe usingazive izvo izvo, ini ndinonzwisisa yako chirevo. Ose maRed Hat uye iwe unobatsirika nebasa rekugovera iri, iro riri kugara richitsva.
Pamp inotsigira yemahara software asi inouya neisina-yemahara firmware, ndosaka isiri mukati meiyo fsf distros
ngatisiye kunyanyisa, microsoft uye mamwe makambani mazhinji nezvimwe vakabatana mukugadzira linux, havazoshandisa linux kuti vasave beta tester yeiyi?
ianpock zvimwechetezvo zvinoitika ne ubuntu kunyangwe iyo fsf yakashoropodza ubuntu zvakanyanya kupfuura fedora. tichiti ine spyware kubva kuAmazon uye pamusoro payo haina kupfava mahara
vakomana, vakomana ... pano hapana kunyanyisa kana kunyepa. Iyo inyaya yeku KUSAIRA, kusvika pazvinogoneka uye nekuziva, kuti iro bhizinesi boka (riine zvido zvavo) rinogadzirisa maitiro, mufananidzo uye shanduko yeiyo inoshanda sisitimu inogona kunge iri pc yako. Fedora anosangana nezvinangwa izvi zveRed Hat. Zvino ndizvo zvinoita Centos.
Mamwe ma distros anozvipira mukuvandudza bhizinesi anosanganisira Suse uye Ubuntu.
PS: ndinofanira kujekesa kuti zvido zvevashandisi hazvisi zvemakambani?
... Kune gumi pesos zvakawanda isu tinoisa conditioner, saka ane yakajeka uye bhizimusi musoro!
Asi nzwisisa kuti iyi mahara software uye iwe une rusununguko rwekumhanya, kugadzirisa, kudzidza uye kuigovera.
Muchikamu chehunyanzvi vese Fedora uye Red Hat vanga vachitsigira zvemahara software uye kunyange Suse mabhenefiti kubva mairi.
daryo yemhinduro 18. Ini handisi anonyanyisa (ini ndiri munhu anonyanyisa mukusa shandisa systemd, ipapo kana ndichibvumirana newe) sezvaunoona ini ndakakupindura neUbuntu (Zvakanaka raive Lubuntu chairo). Ini ndinongozvitaura nekuti vazhinji vanoti i100% Yemahara Software uye ine isina-yemahara firmware. Uye zvakawanda kupfuura zvakajairwa Ubuntu. Ini ndinogona kuzvisimbisa kwauri nekuti fedora / centos / stella distros pese pandinenge ndavashandisa, iyo wifi yakandishandira zvakanaka isina kuisa chero mutyairi (ini ndine iyo b4318) pane iyo Ubuntu hongu.
PS: Handifunge kuti mu lubuntu ndine amazon-spyware.
Izvo hazvisanganise asiri emahara uye epatent-ane hukama mapakeji. Iwe unogona kutarisa yavo yemahara software nhungamiro uye ivo vakasimba kwazvo.
Chinhu chega chisina kusununguka firmware.
Asi chandiri kureva ndechekuti anoita basa rakawanda renharaunda. Nekugadzira yemahara software, munhu wese anobatsirwa, kwete chete Red Hat. Saka usare nekusarura kwako. Nekuti nekutenda kuna Fedora yakawanda tekinoroji yakagadziridzwa.
Ini ndatova neGnome 3.14 Antergos yakanyatsogadziriswa. Kuva vese Gnome 3.14 Pane chero munhu anoziva izvo zvakawedzera kukosha iyi Fedora 21 ine? Zvinokurumidza here? Zviri nani pre-yakagadzirirwa?
Wese wongororo anoipenda "zvakanaka!" asi ini handione chero chinhu chine imwe gnome 3.14 distro isina ...
Izvo zvinondipa kuti ini ndiri kuenda kuzviisa mune imwe chikamu uye ini ndiri kuzopedzisira neakaenzana maviri masystem 🙂
Zvakanaka chirongwa cheGnome chinotsigirwa zvakanyanya neRed Hat saka kusangana kweGnome muFedora kwakanaka. Ndinokurudzira kuti iwe uzviedze uye iwe uchaona :).
Mario Garcia akadaro
Mupiro wakanaka kwazvo 🙂
Pindura kuna Mario García
Rui Quaresma akadaro
Mhoroi, ndakafarira rondedzero yaFedora 21, kana yaiswa, zvingaite kukwidziridza mhando ye "mafonti" (fontconfig-infinality) izvozvi ndiri kushandisa openSUSE 13.2 nerudzi urwu rwekuvandudza font iyo fedora isingakwanise kuita 21 ndatenda Batsirai ndatenda
Pindura Rui Quaresma
Edza Fedy, ine sarudzo yekuvandudza font kupa (pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda).
Iwe hauna repo yako yeF21 zvakadaro asi inoshanda kwazvo.
su -c «curl https://satya164.github.io/fedy/fedy-installer -o fedy-mugadziri && chmod + x fedy-mugadziri && ./fedy-installer »
Vhura iyo terminal uye pinda se midzi. Wobva watevera nhanho idzi:
Namatira izvi zvirimo:
zita = Kusakwana
zita = Kusingaperi - noarch
Sevha neCTRL + O uye wovhara neCTRL + X.
yum kuisa fontconfig-infinality
uye takagadzirira :).
Yakanaka kwazvo posvo, iyo yakaipa chinhu nezve Fedora ine systemD, kune vashandisi vane freebsd.
Mhoro, huya ubatsire ndatenda waita sezvakatsanangurwa neizvi uye zvakafamba mushe, ikozvino ndine Fedora 21 masosi ane mhando huru. Ndinoda kukutendai nekuwanika kwenyu uye kubatsira zvakare avo vanoda mafonti eFedora 21 ane mhando yakanaka kuti vaone neizvi zvinotsanangurwa pano. Ndatenda.
Peter, ndeipi iri nani Fedora 21 kana CentOS 7?
Mune maonero angu CentOS 7 iri nani, asi Fedora 21 Workstation inosvika padhuze uye ine software yakawanda uye Gnome 3.14:)…
Ndeapi maLinux anogovera aunoshandisa, iwe unofunga ndezvipi zvakanakisa zvekuita ese marudzi emabasa?
Ndeapi linux anogovera aunoshandisa? Ndeupi waunofunga kuti ndiwo akanak kuita zvese?
Ngatione Alask, ndakagara neFreeBSD 10.1 pane server uye pakombuta uye palaptop Ini ndinochengetedza distro yakagadzikana ine rutsigiro rwakakura rweCentOS 7. Iyo distro ine akawanda mapakeji uye pamwe neiyo EPEL repo haina chaishaya. Pamusoro iwe unowana makore gumi ekutsigirwa.
Ini ndinobva CRUNCHBANG, ndanga ndichishandisa ichi kugovera kwemakore matatu, ndakaneta ndikachinjira kuFedora ... kusvika zvino zvakanaka. Ndinovimba inogona kudzika.
Pindura kuna diukx
"Chii chekuita mushure mekuisa fedora" ???? zvakafanana senguva dzose, uninstall it.
Isaac anopamba akadaro
Yako posvo yakanaka kwazvo, ini ndangoisa F21, haha ​​chokwadi, ndinofanira kubvuma (sezvandakaona mune imwe chinyorwa pano) kuti ndiri "distr-jummper" ndakaedza [U / X / K / L ] buntu, Debian, Mint, yekutanga, uye yakareba nezvimwe zvandisingatombo rangarira, chokwadi ndechekuti kumisikidzwa kweF21 kwakaratidzika kunge kuchikurumidza, uye kuri nyore (zvakangonamirwa panguva yekuparadzaniswa kwebhuku kubvira ini ndichigadzirisa chidimbu neW8.1). Ichokwadi ndechekuti ini ndinowedzera mvura kupfuura Ubuntu-GNOME uye muchina wangu chinyakare uye chakavimbika VAIO VGN-N350FE (Intel Core Duo CPU T2350 @ 1.867GHz, 2GB ye RAM, 120GB HD [IDE]) uye chokwadi ndechekuti ndiyo distro inoratidza kuita kwakanakisa (pamwe neyekutanga), bhenefiti chete iyo yekutanga ine palaptop yangu ndeyekuti chete neyekutanga laptop yangu inotenderera isina kubatana, asi ndeyechinyakare uye chokwadi hachigare zvakanyanya kuti hazvina basa.inofanirwa kunge yakabatana nguva dzese. Ndinovimba unoramba uchipa zvirimo nezve F21. Kwaziso kubva kuCoahuila, Mexico
Pindura kuna Isaac Robles
Ndatenda zvikuru uye ndinofara 😀
Hi Peter, pandakangochinjira kuna Fedora 21, ndakafadzwa nekumisikidza; kubvira pandakaisa madhiraivha eAti.
Ndiri kungovandudza, asi ini ndine mubvunzo, iyo rpmfusion repositories ine maviri maBhaibheri: kusunungura 2 uye kusunungura yakagadzikana. Ndeupi waunokurudzira?
Ini ndinobvunza, nekuti ini ndinoona kuti danga harina kugadziridzwa munguva yakati rebei.
Ini ndakachinja nekuti ndiri kutsvaga yakagadzika uye yazvino system, asi izvo zvandinogona pasina kukwidziridzwa mumwedzi uye pasina kutyora system.
Ini ndinogara ndichiisa iyo vhezheni inoenderana neshanduro yeiyo distro, saka ini ndinokurudzira kuti iwe ushandise vhezheni 21 yemahara uye 21 isiri yemahara.
Ini ndangoburitsa Fedora, ini handidi kuti yatove padesktop, yakandipa matambudziko mazhinji: Slow repositories, havaise zvakanaka, Firefox inovhara, ndakaona zvishoma kukwenenzverwa madhiri eAti (fglrx).
Iye zvino ndiri paArch, asi ikozvino ini ndoda Ciclyc distros, ndaneta nekurwa nehurongwa.
Ini ndanga ndichifunga nezveUbuntu (asi ndichiedza kurerutsa Kubatana) kana Lmint neCinnamon, asi zvandiri kuona inyaya yekukwiridzira kubva pane imwe vhezheni kuenda kune imwe: 12.04 kusvika 14.04.
Kwaziso 😀 uye zororo rinofadza (Kukadzi 14).
Zvakanaka izvo hazvishamise Kikin sezvo ini ndisina matambudziko neFedora neGnome-shell ... Yekumhanyisa kwenzvimbo dzekuchengetedza pane plugin ...
yum kuisa yum-plugin-inomhanyisa mhanyisa
Ko zvakadii madhiri eAti anezvivakwa ... Fedora anogara achiisa madhiraivhi emahara uye haamboise anozvibata nekutadza ... Kune vatyairi vanezvivakwa, unofanirwa kuita matanho mashoma:
Ehe, ini ndaifunga kudaro nevatyairi vemahara, ini ndakanyatso isa iwo emahara, saka ndakavachinja asi zvakadaro, handina kuzvifarira.
Hongu, ini ndakashandisawo "fastestmirror", nezvimwe ... Asi zvakandipa zvakaipa.
Mune yangu kesi ndakaisa iyo Xfce vhezheni, nekuti ini ndaida chimwe chinhu chakareruka. Kana Arch ikundikana ini (inova ndiyo inogoneka), ini ndichapa Fedora mumwe mukana zvakare uye Ubuntu inotevera. Ini ndatova neiyo Usb kuisirwa yakagadzirira yega yega 😀
Zvakanaka, ini ndiri kuzopa Slackware mukana mutsva mushanduro yayo 14.2, iri kuda kuve caramelized: D ... Nei? Na KDE 5, XFCE 4.12, LXQT uye na:
Iyo yatovepo ye14.1 asi muna 14.2 ichave ichisanganisirwa mu distro ... Uye kuonekana nekugadziriswa kwemaoko kutsamira muSlackware ...: D.
Kwete, handisi kukwezvwa kuyedza zvekare. Ndinoziva kuti Slackware yakagadzikana, asi haina kudzokororwa uye kana chimwe chinhu chikaitika, hapana zvinyorwa zvakawanda zvacho; saka izvozvi ndiri kuenda kuUbuntu, zvirinani kuti ndinoziva kuti chinhu chete chinogona kundimomotera kubatana. Asi ini ndichaedza kuti zvireruke.
SlackWare 14.2 inoburitswa riini? Ndiri kunetsekana ... 😉
Mhoro @ AleQwerty, kubva pane zvandinoziva, zvichave pakupera kwaKurume kana kutanga kwaKubvumbi:)…
@ kik1n Chinhu chega icho Ubuntu chauchakupa pamwe neUbatanidzwa chichava mabhugi mumapakeji anouya kubva kuyedza / kusagadzikana bazi reDebian ... Zvinenge zvirinani kugara muArch pane kushandisa Ubuntu: D.
Hongu, ndakaona, ini ndakakanda iyo graphical nharaunda kuyedza kurerutsa kubatana.
Ini ndichaedza kugara pane arch kudzamara rudo rwangu rweOSUSE rwadzoka.
Ok, ndatenda @petercheco ndinenge ndakateerera 😉
Ndatenda zvikuru nekutora dambudziko kuti zvinhu zvive nyore kune zvitsva. Ini ndiri mutsva ku fedora uye ndiri kuda kuzviedza. Mushure mekumisikidzwa ini ndakatanga nezano rako asi iyo wget haina kundishandira ... zvisinei yakashanda seizvi:
su -c 'dnf gadza -nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm'
yandakatora kubva kune imwe webhusaiti, unogona kunditsanangurira nei?
kwaziso uye ndinokutendai zvikuru !!!
Mhoro uye ndinokutendai zvikuru nerumbidzo :). Ne wget izvo zvaunoita ingo kurodha pasi pasuru uye ipapo unofanirwa kuiisa nekudzvanya kaviri kana nekuita yum install rpmfusion-free-release-solid.noarch.rpm && yum install rpmfusion-nonfree-release-solid.noarch.rpm
Izvo zvawakaita kurodha pasi nekumisikidza panguva imwe chete uchishandisa chirongwa chitsva cheFedora (DNF) chinotsiva iyo yekare YUM.
Nicolas Rincon akadaro
Kwakanaka post, kwaziso, tarisa, ndatoita zvese post yekuisa mu fedora 21, uye ndiri kunetsekana kuisa software kubva kune software centre, kwete ese maapplication ane iyo yekuisa bhatani, riini vasati vadaro, uye kana ini pandinoedza kuisa Chikumbiro ini ndaisa yangu midzi kupfuura uye zvinondiudza kuti paive nekanganiso mukutora, iwe unogona kundibatsira. Ndatenda
Pindura kuna Nicolas Rincon
Mhoroi, iyo Fedora software centre ine dambudziko rakasarudzika uye nderekuti rinongoshanda neyakagadzika repos uye kwete nemazororo akaita se rpmfusion, nezvimwe ... ndinokukurudzira kuti uise yumex iyo isina dambudziko.
YeFedora 21 uye pakutanga:
yum kuisa yumex
YeFedora 22 uye gare gare:
dnf gadza yumex-dnf
Mupiro wakanaka kwazvo, unoongwa
Kwaziso kubva kuLonquimay, Araucanía, Chile
Pindura kuna solis.sob
Kwakanaka kutumira, asi ndingaisa sei mafomu senge multimedia players, hofisi, zvinopisa uye mabhurawuza asina internet mu fedora 21?
Pasina internet, iwe unofanirwa kugadzira repo renzvimbo kubva kuzere dvd:
Tanglu 2.0 "Bartholomea" yakaburitswa
Maitiro ekudzoreredza akadzimwa mazita muGmail